သြစတြီးယားအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(499 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... သြစတြီးယားလောင်းကစားအတော်လေးဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, နှစ်ပေါင်းများစွာကဝင်ငွေနိုင်ငံ၏အဓိကရင်းမြစ်များအတွက်လောင်းကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြီးယားအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းအားလုံးသည်ပုံစံများကိုဘဏ္ဍာရေး၏ဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးဌာန (Bundesministerium Finanzen သားမွေး) ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ ယနေ့ 12 မြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံရှိပါတယ်။ ဧည့်သည်တိုးတက်သောထီပေါက်နှင့်အခြားလောင်းကစားဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူကစားတဲ့, ဖဲချပ်ဝေ, Blackjack, slot ကစက်တွေအပါအဝင်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်းနေကြသည်။
သြစတြီးယားမှာရှိတဲ့အကျော်ကြားဆုံးလောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ခြင်းဟိုတယ် Grand Hotel de l'ဥရောပများ၏အဆောက်အဦများတွင်တည်ရှိသောကာစီနိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ က 1907 ကတည်းကအများပြည်သူဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် 1984 စတုရန်းမီတာဧရိယာရှိပါတယ်အခါဟိုတယ်သူ့ဟာသူ 600 built-in, နှင့်လောင်းကစားအိမ်သူအိမ်သားခဲ့သညျ။ သြစတြီးယားခရီးသွားဧည့်အကြားတစ်ဦးလူကြိုက်များအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကအများဆုံးလောင်းကစားရုံဟိုတယ်အနီးတွင်တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏။ ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းအိမ်များနာရီဝန်းကျင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးသတိပြုပါ။ 18 သို့မဟုတ် 00: 19 သူတို့ဟာ 00 ကနေဧည့်သည်မှဖွင့်လှစ်ကြသည်။
အင်တာနက်ကလောင်းကစားဝိုင်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်အတော်လေးရှည်သမိုင်းရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ Channel ကိုကျွန်းများအဖြစ်တိုင်းပြည်များ၏နယ်မြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်တချို့ကက်ဘ်ဆိုက်များဥရောပ၌သြစတြီးယားတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစား, အများဆုံးအမြတ်အစွန်းအကြားရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံအများအပြားအတွက်လိုင်စင်ရထားတဲ့သြစတြီးယားအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ Bvin (Bwin), သတိပြုပါ။
အသစ်သောအွန်လိုင်းလောင်းကစားတွင်ကျယ်စွာ၏ပစ်လွှတ် - သြစတြီးယားတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏ဥပဒေများသည်လည်းသင်တို့ကိုတိုင်းပြည်, ရာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတည်ရှိပါတယ်အခြားကုမ္ပဏီများမှလိုင်စင်ပေးရန်ခွင့်ပြုပါ။ သို့သော်တဦးတည်းအခွအေနေလည်းမရှိ - ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခုတည်းကိုသာဒေသခံလောင်းကစားသမားတွေဖွငျ့နေကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင်ကျယ်စွာမှာဂိမ်း၏ပြဿနာအပေါ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်, သြစတြီးယားနှင့်လူဦးရေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နိုင်ငံခြားဆိုဒ်များန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်
သြစတြီးယားကနေကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့်သြစတြီးယားကနေကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
နှင်း-အဖြစ်သို့အဲလ်ပ်တောင်တန်း, သဘာဝရေကန်များနှင့် marzipan နှင့်အတူအရသာသကြားလုံး mozartkugel - ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနှင့်ပိုပြီးသြစတြီးယား၏အမာခံများဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်ကအကောင်းဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်ဂိမ်းကစားကလပ်ကိုရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက်ယနေ့သင်တို့နှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှု CasinoToplists ။
သြစတြီးယား - ကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်ဤနိုင်ငံတွင်လောင်းကစားဝိုင်း:
မြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံခွင့်ပြုနေကြတယ်, သူတို့သင်္ဘောများပေါ်တွင်လောင်းကစားရုံနှင့်အတူလည်းရှိပါတယ်, 12 ပါ၏
နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာယခုပိတ်ဆို့အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံရုပ်သိမ်း Ban ခင်မှာ;
ဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံသြစတြီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏တရားဝင်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ၏ပထမဦးဆုံးဖော်ပြထားခြင်း 996 အေဒီသြစတြီးယားဥရောပ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်နှစ်တွင်မှစတငျ။ နိုင်ငံ၏သမိုင်းအလွန်နီးကပ်စွာ Bavaria ၏ဂျာမန်ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည် - သာ 1156 ထဲမှာ, သမ္မတနိုင်ငံလွတ်လပ်တဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်အတွက်တဦးတည်းထိုအချိန်တွင်တူရကီ, ပြင်သစ်နှင့်သင်တန်း၏ဂျာမဏီနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည်ဖို့အပြင်အလွန်ခက်ခဲချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ခရိုအေးရှားနှင့်ဟန်ဂေရီသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဗီယင်နာမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမဏီအဖြစ်ဒုတိယကမ်ဘာစစ်သြစတြီးယား၏အဆုံးပြီးနောက်4ဇုန်သို့ခွဲခြားခဲ့သည်။
တစ်ဦးလောင်းကစားရုံများဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပထမဦးဆုံးလိုင်စင် 1922 အတွက်ထုတ်ပေးခဲ့များနှင့်ပထမဦးဆုံးလောင်းကစားတည်ထောင်ခြင်း Salzburg အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. အများကြီးရေစီးထွက်ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစျခုအရာအတူတူပင်ဖြစ်နေဆဲ - သြစတြီးယားတစ်ဦးလောင်းကစားရုံခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ က 12 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ကျင်းပနိုင်ရန်၏နိယာမအရသိရသည်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်သည်, "ကာစီနိုဂိမ်းသြစတြီးယား" ၏အကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီ "ကာစီနိုဂိမ်းသြစတြီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ" ဝေးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်လူသိများသည်: က 15 ပြည်နယ်များအတွက်အခက်များရှိပြီးသူမ၏ run 57 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအောက်မှာလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီလောင်းကစားလုပ်ငန်းကိုတစ်ဦးထက်ပိုသောအကျိုးအမြတ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး: ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်လောင်းကစားရုံနှင့်အတူသင်္ဘောများ။ သူတို့ရဲ့အရေအတွက်ကလျှင်မြန်စွာ 100 ၏အမှတ်အသားချဉ်းကပ်နေပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ Gastein - Salzburg တစ်တောင်ပိုင်းဆင်ခြေဖုံး
ဤမြို့၌သြစတြီးယား, ဒါပေမယ့်လည်းဥရောပတစ်လျှောက်လုံးသာအများဆုံးဇိမ်ခံကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်ဦးရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစောပိုင်း XX ရာစု built-in က Grand ဟိုတယ် de l'ဥရောပများ၏အဆောက်အဦထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် 19 ကနေစတင်အပြည့်အဝစွမ်းရည်မှာလောင်းကစားရုံလည်ပတ်: 00, ထိုသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဆန္ဒရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်စားဆင်ယင် code ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ် - အားကစားဝတ်စုံနှင့်ဘောင်းဘီတိုကိုဒီမှာကြိုဆိုနေကြသည်မဟုတ်။ ကိုယျတျောနှငျ့သငျသညျမဆိုမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဓိကအရာ - သင်၏ဓါတ်ပုံများ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အသက်အရွယ် 18 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးတဲ့။ အဆိုပါဝင်ပေါက်လက်မှတ်သင်သည်ထိုသူတို့ယူရို 23 အတွက်တန်ဖိုးတိုကင်မရ, 25 ယူရိုကုန်ကျသည်။
သူ့ဟာသူအတွက်ဆွဲဆောင်မှုကြောင်း, ဤမြို့ထဲမှာ, လောင်းကစားရုံ«ကာစီနို Salzburg » Schloss Klessheim ၏ဤနန်းတော်၌တည်ရှိပြီးယင်း rococo စတိုင်စိတ်ထဲ-မှုတ်အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤအရပျရုံရှုခင်းရိုက်ကူးဖို့ရတဲ့မပေးပါ။ ယင်း၏တန်ဖိုးအချိန်နှင့်နန်းတော်၌နေရာတစ်နေရာယူကြောင်းဖြစ်ရပ်များအပေါ်မူတည်ပေးဆောင်သည့်လောင်းကစားရုံမှဝင်ပေါက်။ ဒါဟာပြဇာတ်တင်ဆက်မှုအသင်းအဖွဲ့များသို့မဟုတ်အဆိုတော်တွေနိုင်ပါတယ်။
Velden ၏အပန်းဖြေစခန်းမြို့ကိုလည်း 1950 ပြန် built ယင်း၏ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, ကျော်ကြားသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Fortune မဂ္ဂဇင်း၏အမြီးကိုဖမ်းလိုသောသူတို့အား ပို. ပို. ဖြစ်လာကတည်းကသို့သော်အဆိုပါလောင်းကစားရုံအဆောက်အဦးတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ 1989 ဖွင့်လှစ်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း, 4,000 ဧည့်သည်များယူနိုင်ခဲ့သည်နှင့်မနည်းဇိမ်ခံဖြစ်ပါတယ်။ အံ့ဖှယျအိုင်ကျော်စားသောက်ဆိုင်, ဘစ်စထရို, ဘားနှင့်ပြင်ပကစား ploschadka- ကျန်ကြွင်းရှိပါသည်။ ဒါဟာမှန်ကန်စွာဥရောပတိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ခေတ်သစ်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဗီယင်နာအော်ပရာ။ တည်နေရာ: ဗီယင်နာ, Opernring,2။ ; ဒါ "ဗီယင်နာအော်ပရာ" ကိုတစ်ဦးအလည်အပတ်မဖြစ်မနေကြည့်ဆွဲဆောင်မှုများ၏စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်, မိုဇတ် - သြစတြီးယားဂီတပါရမီဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည်
Hundertwasser အိမ်။ တည်နေရာ: ဗီယင်နာ, Untere Weissgerberstrasse, 13 ။ ဤလိပ်စာမှသငျသညျသြစတြီးယားအတွက်အများဆုံးသာမန်ထက်အဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဇီးဂမွန် Freud ပြတိုက်။ တည်နေရာ: ဗီယင်နာ, Berggasse, 19 ။ နာမည်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ပြတိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သေချာစေပါ။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်အသက်တာ၏ဒါပေမယ့်လည်း psychotherapeutic အလေ့အကျင့်မသာကိုပြောသည်လိမ့်မည်။ ကြီးစွာသော psychoanalyst ၏အဆောက်အဦးနီးပါး 47 နှစ်ပေါင်းနေထိုင်ခဲ့တယ်။
ဗီယင်နာဝုဒ်။ တည်နေရာ: ဗီယင်နာ, Wienerwald ။ ဗီယင်နာ၏အလုပ်များလမ်း၌ပင်ပန်း, သင်အမြဲတမ်းခမ်းနားမြို့ဥယျာဉ်၌အနားယူနိုင်ပါတယ်။
ပြတိုက် "အနုပညာသမိုင်း" ။ နေရပ်လိပ်စာ:5Burgring ။ ဤတွင်သင့်ရဲ့အကြည့်မူရင်း Titian, Raphael, Vermeer နှင့်အခြားစာရေးဆရာများကဲ့သို့သောသခင်အားဖြင့်ပန်းချီကားများအဖြစ်ပန်းပုနှင့်အမျိုးမျိုးသော artefacts ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါလူဦးရေ 8% ဂျာမန်စကားမပြောတတ်, 4, 90 လူဦးရေသန်းရှိ၏
သောကြောင့်အမည်များ၏တူ၏, မကြာမကြာသြစတြေးလျနှင့်အတူသြစတြီးယားရောထွေး။ ဒါကြောင့်အလွန်လူကြိုက်များအမှတ်တရပစ္စည်းများသည် "သြစတြီးယား: အဘယ်သူမျှမသားပိုက်ကောင်ရှိပါတယ်";
ဒါဟာအစား 19 ၏ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံသားများနှစ်ပေါင်း 18 ခွင့်ပြုခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်,
ရေကန် Gruner အမှန်တကယ်ပန်းခြံဖုံးကွယ် - အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌နက်နဲသာ 1-2 မီတာ, ဒါပေမယ့်အရည်ပျော်ရေအတိမ်အနက်ကို၏ရေကြီးမှု 12 မီတာဖြစ်လာပြီးနောက်,
သြစတြီးယား, ဂျာမနီ၌ရှိသကဲ့သို့, ထိုချွေးပေါင်းအိမ်ထဲတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူညီခန်းထဲမှာရေချိုး;
ဒီနိုင်ငံဟာမိုဇတ်မသာမှဒါပေမယ့်လည်း Haydn, Schubert, Liszt, Strauss, Mahler, Bruckner နေဖြင့်မူလနေရာဖြစ်သည်။
0.2 ထိပ်တန်း 10 သြစတြီးယားအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3.1.1.1 မကောင်းတဲ့ Gastein - Salzburg တစ်တောင်ပိုင်းဆင်ခြေဖုံး